Ny birao isan-trano dia mila iray! | Martech Zone
Ny birao isan-trano dia mila iray!
Alatsinainy Desambra 4, 2006 Zoma, Oktobra 24, 2014 Douglas Karr
Herintaona lasa izay (2005) dia nanao consulting kely teo an-daniny aho ary nila nahazo fitaovana vaovao manodidina ny trano hikirakira azy. Nividy solosaina vaovao, router tsy misy tariby netgear vaovao ary karatra tsy misy tariby aho… ary ny fampiasam-bola tsara indrindra dia ny LinkStation.
Ny LinkStation dia mifandray mivantana amin'ny router tsy misy tariby amiko ary manana habaka 250Gb. Tsotra tokoa ny interface an'ny mpampiasa ny LinkStation… Afaka nametraka kapila ho an'ny zanako tsirairay avy aho, ny solosainako, ny lahatahiry mozika afovoany ary ny famerenan'ny mpanjifa azy. Ny LinkStation koa dia tonga tamin'ny fivoahan'ny USB hizara mpanonta, rindrambaiko FTP, ary na dia rindrambaiko streaming media aza. Io dia ahafahako mametraka ny mpanonta ahy lavitra ny solosaina sy amin'ny toerana mety.
Ny tena tiako anefa dia ny manana toerana malalaka lavitra ny PC-ko sy ny loharano iray misy ny tamba-jotra. Isaky ny vita ny tetik'asa iray, dia alahako etsy. Isaky ny misintona sy mametraka rindrambaiko aho dia nanao kopia tany, ary isaky ny te hizara zavatra eo anelanelan'ny solosaina aho dia ampitainay fotsiny amin'ny fizarana azy rehetra ireo rakitra. Tsy misy 'fizarana lahatahiry', tsy misy kapila apetraka, tsy misy olana mihitsy.
Tokony ho 7 volana lasa izay, ny PC-ko dia voadona tanteraka tamin'ny fanavaozana Norton Antivirus izay nanala ny sehatry ny boot. Tsy maintsy namboariko ny fiara ary averiko indray ny zava-drehetra. Mety ho nofy ratsy tanteraka tsy misy afa-tsy izaho ny zava-drehetra fenoina amin'ny kapila tambajotra. Niverina tao anatin'ny iray andro teo ho eo aho ary tsy diso ny gadona.
Herintaona sy tapany taty aoriana ary ankehitriny ny iray amin'ireo mpanjifako dia nangataka ahy hanao famerimberenana famerenana ho azy. Ela be io ka tsy naterako intsony ireo rindranasa. Ny faran'ny herinandro lasa teo dia nitsambikina tamin'ny anjara birikiko aho ary namerina nandefa ireo fangatahana. Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia nampidina ny fanadihadiana taloha aho ary afaka nandondona ny fandalinana androany tolakandro. Ny fanabeazana ny tenako amin'ny fampiharana no ampahany sarotra indrindra!
Ka - ity misy torohevitra vitsivitsy ho an'ny matihanina sy ireo mpankafy izay miasa betsaka amin'ny solosain'izy ireo:
Ampiasao amin'ny fitaovana fitahirizana tambajotra.
Ampiasao ny fitaovan'ny fitehirizana tamba-jotra. Isaky ny mety ho azonao, alao ny dika amin'ny asa ataonao aminy.
Adikao ny fametrahana rindrambaiko, ny fanavaozana, ny fanavaozana ny mpamily, ary na dia ny laharana serial aza amin'ny fizarana. Mametraka ny zava-drehetra soa aman-tsara amin'ny toerana roa ity.
Ny zavatra mahafinaritra amin'ny fitahirizana tamba-jotra dia ny tsy fisian'ny backup sy ny famerenana amin'ny laoniny ny fotoana ilaina… adika fotsiny ny rakitra amin'ny drive, haingana kokoa amin'ity fomba ity. (Manana backup-n'ny tsirairay amin'ireo PC-ko aho).
Ary raha manontany tena ianao, hitan'ny Mac fa tsara daholo ihany koa! Na ny mpanonta iraisana aza!
Tags: nomaniny ho solon'izaylinkstationfitaovana fitahirizana
Tsy ho faty ny fijerin'ny pejy
Fitsipika 10 momba ny fivoriana mendrika
Dec 4, 2006 ao amin'ny 9: PM PM
Izaho koa dia mpankafy ny fitaovana LinkStation. Manana ny kinova 160GB ny tenako ary mihazakazaka matanjaka efa ho 2 taona izao. Ny zavatra tsara indrindra dia noho ny toetran'ny fitaovana ao aminy, saika tsy misy fikojakojana na fikarakarana na famahanana ilaina.
Dec 4, 2006 ao amin'ny 10: PM PM
Taorian'ny nividianako ny ahy dia namako ny kinova 1Tb ny namako iray. Saro-piaro aho! Tiany koa ny azy. Manontany tena aho hoe maninona no mbola tsy nisy nanamboatra ny router mpanonta / Harddrive / Wireless.